အမျိုးမျိုး: GNU / Linux Distros အတွက်အသုံးဝင်သောနောက်ခံပုံမန်နေဂျာ Linux မှ
အမျိုးမျိုး: GNU / Linux Distros အတွက်အသုံးဝင်သောနောက်ခံမန်နေဂျာ
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကငါတို့ပြောခဲ့တယ် Pywallကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောလျှောက်လွှာ အရောင် palette ကို generate ကျွန်တော်တို့ရဲ့များ၏အဓိကအရောင်အနေဖြင့် ဝေါလ်ပေပါ, ငါတို့ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်ထားသော ဘူတာရုံတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ အလိုအလျောက် personalization, ပြသထားသည့်စာလုံးများ၏အရောင်များ (ဖောင့်များ) ။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါတို့ပြောကြမယ် အမျိုးမျိုး။
အမျိုးမျိုး တစ် ဦး အလွဖြစ်ပါတယ် နောက်ခံပုံများ (နောက်ခံပုံများ) ၏မန်နေဂျာ (မန်နေဂျာ)။ အများအပြားအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များအကြားဘယ်မှာမြောက်မြားစွာများအတွက်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည် Desktop Environments (DE) y နောက်ခံပုံရင်းမြစ်များဒေသခံဖိုင်များနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် Flickr၊ Wallhaven၊ Unsplashနှင့်အခြားသူများ။
Pywal - ကျွန်ုပ်တို့၏ Terminal များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကိရိယာတစ်ခု
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကပြောဆိုခဲ့သည် ပြည် နှင့်ယနေ့အကြောင်းကို အမျိုးမျိုးဤလျှောက်လွှာနှစ်ခုနှင့်အတူမည်သူမဆိုအလွန့်အလွန်အောင်မြင်နိုင်သည် အလိုအလျောက်နှင့်ညှိစိတ်ကြိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု သင်၏နောက်ခံပုံများ၏အရောင်များနှင့်သင်၏ Terminals များ၏ဖောင့်များ၏အရောင်ကိုဖော်ပြရန်။
"Pywal သည်ပုံ၏အဓိကအရောင်များမှအရောင်များကိုထုတ်ပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးရင်အရောင်တွေကို system တစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးသင်အကြိုက်ဆုံးပြသမှုအားလုံးမှာပျံသန်းပါ။ လက်ရှိတွင်အရောင်မျိုးစုံထုတ်လုပ်သည့် backends ၅ ခုရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်ပုံတစ်ခုစီအတွက်မတူညီသောအရောင်ကိုပေးသည်။ သင်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Pywal တွင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းပံ့ပိုးပေးပြီး ၂၅၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည့်အခင်းအကျင်းများရှိသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အခင်းအကျင်းဖိုင်များကိုအခြားသူများနှင့်မျှဝေရန်လည်းသင်လုပ်နိုင်သည်။" Pywal - ကျွန်ုပ်တို့၏ Terminal များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကိရိယာတစ်ခု
1 အမျိုးအစား: နောက်ခံပုံမန်နေဂျာ (နောက်ခံပုံများ)
1.3.1 Application interface
1.3.2 အမျိုးမျိုး + Pywal
အမျိုးအစား: နောက်ခံပုံမန်နေဂျာ (နောက်ခံပုံများ)
လက်ရှိတွင် အမျိုးမျိုး ၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ developer အားဖြင့်ဖော်ပြထားသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
"Variety သည် Linux အတွက် Open Source Wallpaper (Administrator) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်ထူးကဲသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျိုးစုံသည်ဒေသခံရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ် Unsplash နှင့်အခြားအွန်လိုင်းရင်းမြစ်များမှ wallpapers များကိုအလိုအလျောက် download နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သူတို့ကိုပုံမှန်ကြားကာလတွင်လှည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကြီးမားသောပုံရိပ်များကို junk မှခွဲထုတ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများကိုပေးသည်။ Variety သည်ပညာရှိသော၊ ရယ်စရာကောင်းသောကိုးကားချက်များသို့မဟုတ်သင့် desktop ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောဒီဂျစ်တယ်နာရီကိုဖော်ပြနိုင်သည်။"
ဒီနေ့ အမျိုးမျိုး အဘို့အသွားသည် ဗားရှင်းနံပါတ် 0.8.5နှင့်ယနေ့ရှိသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအနက်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
Support လုပ်သည့်အခါ Variety သည်ခေတ္တရပ်တန့်ရန်နှင့်ပြန်လည်စတင်ရန်အတွက် tray icon တစ်ခုနှင့်တူသည်။ မဟုတ်ပါက desktop ပေါ်ရှိ၎င်း၏ input menu သည်အလားတူရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်။
၎င်းတွင်ရေနံပန်းချီနှင့်မှုန်ဝါးခြင်းကဲ့သို့သောပုံရိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင်နောက်ခံတွင်ကိုးကားချက်များနှင့်နာရီကိုနေရာချထားရန်ရွေးချယ်စရာများပါ ၀ င်သည်။
၎င်းသည် Arch Linux, Debian 9+, Fedora, OpenSUSE နှင့် Ubuntu 16.04+ အတွက် installers နှင့်အထောက်အပံ့များပါရှိသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက အမျိုးမျိုး သင်သည်သူတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် GitHub.
ဒီနေရာမှာ screenshots အချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ် အမျိုးမျိုး 0.8.5နှင့်အတူ, repository ကနေတဆင့် install လုပ်ပြီး Apt အထုပ်မန်နေဂျာ, သူ့ Interface ကနှင့် Pywal နှင့်သူ့ကိုအကြားထပ်တူအကျိုးသက်ရောက်မှုများကနေနှစ် ဦး စလုံး:
အမျိုးမျိုး + Pywal
မှတ်ချက်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာဒီလက်တွေ့ဥပမာအတွက် အမျိုးမျိုး + Pywal ကျနော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် စိတ်ကြိုက် respin de MX Linux, ခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများဒါကြောင့်ရှင်းပြထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လိမ့်မည် Desktop Environment (Desktop Enviroment - DE) ကိုခေါ် Xfce။ သို့သော်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြုပြင်နိုင်သည် DE / WMအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Variety»အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ နောက်ခံပုံများ (နောက်ခံပုံများ) ၏မန်နေဂျာ (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)များစွာသောအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များထဲတွင်များစွာသော Desktop Environments (DE) နှင့်နောက်ခံရင်းမြစ်များဖြစ်သော Flickr, Wallhaven, Unsplash နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ဒေသခံဖိုင်များနှင့်အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » အမျိုးမျိုး: GNU / Linux Distros အတွက်အသုံးဝင်သောနောက်ခံမန်နေဂျာ
Raspberry Pi Pico: ပါးလွှာ။ စျေးပေါသော SBC
Dnsmasq တွင်တွေ့ရသောအားနည်းချက်များသည် DNS cache တွင်ပါဝင်သောအရာများကိုလှည့်ဖျားရန်ခွင့်ပြုသည်